Khariidadaha Dhaqdhaqaaqa leh, si aad wax badan uga qabato IMS Manifold - Geofumadas
Khariidado aan caadi ahayn, oo wax badan ka qabta IMS Manifold
Nofeembar, 2008 GIS kala cayncayn ah
Ganacsiyada tiknoolajiyada wanaagsan ayaa had iyo jeer buuxinaya baahiyaha aan la daboolin ee loogu talagalay alaabooyinka jira ama hagaajiya awooddooda. Maalmihii la soo dhaafey waxaan ka hadleyney Manifold adeegyadiisa IMS, oo in kasta oo aysan u dhigmin haysashada GisServer, haddana aysan ku kacayn $ 35,000 halkii processor.
Xaaladdayda, waxay ila tahay in Manifold uu yahay istiraatiijiyad aad u wanaagsan oo lagu abuurayo adeegyo khariidad internet ah, oo ay ku jiraan wcs oo leh aalad tagaysa wax ka yar $ 450. Intaad baranaysid dhajinta Waxay igu kacday daqiiqado 23, u habeynta template ayaa qaadanaya waqti dheeraad ah waxkale oo kaliya ayaa ka hadla si loo akhriyo, loo aqriyo, ugana xanaaqo saaxiibada forumka oo kaliya oo yaqaan "sida wax loo akhriyo".
Khariidadaha Aasaasiga ah waa shirkad laga aasaasay Kanada, isla hal abuurayaasha Carteq.ca. Waxaan lahadlayey Vincent Fréchette, oo kamid ah asxaabtiisa isla markaana wuxuu ii sheegey sida ay u rajeynayaan inay dunidan soo galaan.
Khariidadaha Diyamka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay bixiye adeegyada IMS ee ku saleysan Manifold GIS. Waxay bixiyaan codsiyo qaas ah oo aan la imaanin aasaaska aasaasiga ah ee barnaamijka taas oo siin doonta shaqeyn wanaagsan goobaha la abuuray.
Dhammaan qalabka Khariidadaha Khariidaduhu waxay u hoggaansamaan heerarka tiknoolajiyada looga baahan yahay Manifold GIS.
Nidaamka hawlgalka Windows (XP PRO, VISTA, SERVER 2003 ama 2008), iyo IIS 6 (ama ka sarreeya) oo ah server Web.
Alaabta iyo adeegyada
Qalabka 25 shaqo cusub ee loogu talagalay interface macmiilka, iyada oo la isticmaalayo koodh iyo sharaxaad
Waxyaabaha cusubi waa:
Daabacaan iyo dhoofiyaan pdf / jpg (Fiiri tusaale)
Xulashada xorta ah
Kala saaridda lakabyada habka kala duwan
Muujinta isku-duwidda mooska waqtiga dhabta ah
Xakamee xajmiga iyo booska bandhigga
Isku toosinta tooska ah ee khariidadda sida ku cad cabbirka kormeeraha
Fiiri sida Khariidadaha Google
Moodar isku mid ah sida Khariidadaha Google
Tag jago gaar ah
Xakamaynta xakamaynta muraayada cirifka
Ka hor iyo koontaroolka xakamaynta
Koorso hawlgal dhamaystiran adeegga khariidadaha Manifold GIS, oo sidoo kale ay ku jiraan barnaamijka barashada
Maaddooyinka lagu daray koorsada waxaa ka mid ah:
Hirgelinta qalabka wax lagu cuno
Goobidda adeegsiga IMS
Ugu yaraan, ugu badnaan iyo xakamaynta xakamaynta
Sidee loo xakameynayaa in lakabyada qaar laga heli karo khariidada laakiin aan ku jirin IMS
Template for platform macmiil (Manifold), kaas oo kuu ogolaanaya inaad si dhakhso ah u dhisto codsiyada.
Markii uu la hadlay Vincent, wuxuu ii sheegay in hadda ay mudnaanta siinayaan shan qalab:
1 - Qiyaasta fog
2 - Kala-duwanaanta loo qaybiyo lakabyada
3-Zoom bar (sida Google)
4-Weelka la beddeli karo iyo dib loo furan karo
5-PDF / JPG Dhoofinta
Ogolaanshaha bixinta via Paypal oo credit card u dhiibay via FTP, iyo in kastoo weli waa aan dukaanka online diyaar, waxaad ii soo sheegnay qiimaha, kuwaas oo u muuqdaan kuwo qurux badan oo raqiis ah sida inta u dhaxaysa $ 30 iyo $ 90 halkii qalab (hadda in beta oo soco lagaa jaray markii ugu horeysay ee la furo); ma ahan kuwo xun inay tixgelinayaan in dib loo isticmaali karo, mana ayan soo jeedin qiimaha ay igu qaadayso inaan jabiyo qumbaha .NET ama u jajabiso barnaamij isku mid ah
Inta u dhaxaysa Diisembar 15 iyo Janaayo 15 waxay filayaan inay shaqeeyaan, sidaas darteed qor shabakadan ee aad ugu jeceshahay sababtoo ah waxaan dareemayaa in ay nagu siin doonto wax badan oo aan ka hadalno sannadka soo socda.
Waxaan rajeynayaa in wax waliba ay u fiicantahay guushaas.
Post Previous" Hore Dhammaan diyaar u ah dariiqa "Cloud Computing"
Post Next Sidee loo gudbin karaa kml Google MapsNext »